Vatengi profiles mu e-commerce | ECommerce nhau
Havasi vese vatengi kana vashandisi vakaenzana kana vane hunhu hwakafanana, uye kunyanya kana izvo zviri kutaurwa nezvazvo zviri vatengi mune zvemagetsi zvekutengeserana. Kusvika padanho rekuti ivo vanopa akasiyana akasiyana akasiyana nguva. Uye kuti muzviitiko zvese zvichave zvakakosha kuti utarise mukujekesa a yakatetepa uye yakaenzana nzira yekutengesa kune zvido zvevanamuzvinabhizimusi muchikamu chedigital.
Kubva pane iyi nzira yakajairika, tichaongorora ese ma profiles ari mune vatengi mune zvemagetsi zvekutengeserana aunogona kuwana kubva zvino zvichienda mberi. Kuti uite iyo mamwe mabasa anobatsira zvechiitiko chehunyanzvi chaunomiririra panguva ino. Kunyangwe ivo vachigona kukwidziridzwa kubva kumasystem akasiyana ekuvandudza kutengeswa kwezvako zvigadzirwa, masevhisi kana chinhu
Nekuti mukuita, kuve neruzivo urwu kunogona kukupa iwe ruzivo rwakasimba kwazvo kusimudzira yako bhizinesi modhi. Kwete chete mukutengesa kwezvako zvese zvigadzirwa asiwo zve kugadziriswa kwezvinhu zvekambani yedhijitari. Mupfungwa iyi, hapana chinhu chiri nani pane kukuratidzira pazasi pemamwe maprofiles akakosha ayo vatengi vanogona kuendesa mukutengesa zvemagetsi.
1 Vatengi mune e-commerce: dzimwe nguva maprofiles
2 Mapurogiramu epakati, padyo padyo nekubatanidzwa kwavo
3 Vakavimbika uye venguva yakazara vatengi
Vatengi mune e-commerce: dzimwe nguva maprofiles
Dzimwe nguva kana dzimwe nguva vatengi ndivo avo vanoita avo iwe unotenga online nguva nenguva. Ndokunge, pavanenge vachida chigadzirwa kana pamwe panguva ivo vanenge vaneta nzira dzekutenga chaiko. Kubva panguva ino yekutarisa, chimwe chezvinangwa zvako zvikuru kuchengetedza iri rakakosha boka revashandisi. Ivo vanoda hukuru hukuru kuvabatanidza ivo mune zvebhizinesi mashandiro kuburikidza nemadhijitari chiteshi.
Ichi chikamu chehuwandu hunodiwa zvakanyanya nevashambadzi vadiki nepakati mune iri chikamu. Nekuda kwesimba rakakwira ivo vanofanirwa kuve mutengi vane yakatarwa maitiro uye nehukuru hukuru mukutenga. Mune chero zviitiko zvacho, vane zvakanyatsotsanangurwa zviratidzo zvekuzivikanwa uye ndidzo dzatinokuratidza zvinotevera.
Izvi zvekutenga kwavari ndezvechipiri uye hazviite chinangwa chemafambiro ako mukushandisa.
Mari yepakati yavanoshandisa pakutenga nedhijitari kana nepamhepo zvine mwero uye hazvioneke mubhajeti ravanogadzira gore rega rega.
Ivo havawanzo kuziva chaizvo chaizvo kuti kutenga uku kunoendeswa sei uye vane mamwe matambudziko ekuvandudza mashandiro ekutengeserana kuburikidza neaya matanho ekutengesa.
Kuziva kwavo mapuratifomu anotyaira kutengesa uku kuri kushomeka uye nekudaro vane dambudziko rekuzvizivisa nemazvo.
Ivo havazive izvo zvekupa uye kukwidziridzwa kunoitwa kubva kumatanho kana epamhepo mapuratifomu. Nekuti kufarira kwako kuri kutetepa munzira dzese.
Muzhinji, pane kazhinji vanhu vanoshandiswa kushanda kubva kune zvigadzirwa zvehunyanzvi uye kunyanya avo vemberi kwazvo. Kana zvisiri, pane kudaro, havaratidze kufarira kwakanyanya mukirasi iyi yemidziyo yekutaurirana.
Mapurogiramu epakati, padyo padyo nekubatanidzwa kwavo
Boka rinotevera pakati pevatengi kana vashandisi ndevaya vari mune pakati pepakati. Mune mamwe mazwi, ivo zvishoma nezvishoma vave tsika mukutenga kwavo. Ivo vari kuramba vachiwedzera kufarira rudzi urwu rwekutenga uye vakatonyoreswa mune mamwe mapuratifomu edhijitari mukutengesa kwezvinhu zvavo.
Icho chikamu chemagariro chinoda kuongororwa kwakanyanya neavo vane basa kumabhizimusi kana zvitoro zvemadhijitari. Mupfungwa iyi, ivo vanowanzo tenderera gamuchira kuendeswa kweruzivo uye zvigadzirwa nemakambani aya. Nepo kune rimwe divi, ivo vanowanzo shanda pamwe mashoma online mapuratifomu uye vanopa mamwe ehunhu hwatinokupa iwe pazasi.
Kubatanidzwa kwayo mune idzi nzira dzekutengesa zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa zviri kufambira mberi chaizvo uye zvinoonekwa kuti kuzivikanwa kwayo nekutengesa kwedhijitari kunogutsa.
Ivo vanoenderana neichi cherudzi rwekutenga uye musimboti ivo havawanzo kuve nematambudziko ekuita aya ekutengeserana mashandiro. Uye pane zvinopesana ivo vakanyatsodzidziswa kuzviita kubva kune chero mhando yemhando dzekutengesa nzira.
Vane bhajeti regore rekutenga pamhepo. Kunyangwe pasina hupamhi hweanonyanya kudenha mazinga muprofita mune zvemagetsi zvekutengeserana. Asi vane mikana yakawanda yekubatanidza mune iri boka revashandisi.
Iwo matanho eruzivo rwemagero edhijitari akakwirira kwazvo, asi pasina kusvika pamatanho anodikanwa neavo vane basa rezvemabhizimusi emagetsi Kunyangwe mune zvese zviitiko ivo vari munzira yakajeka yekuwedzera kujoina dzakakwirira nzvimbo.
Ivo vakapindwa muropa nekutenga zvimwe zvigadzirwa kana zvinyorwa uye mune izvi zviitiko vanogovera nezvitoro zvepanyama kuti vazadzise zvavanoda zvekushandisa. Semuenzaniso, mune zvikamu zvetekinoroji nyowani kana mbatya dzemitambo.
Kufarira kwavo kwekupedzisira ndiko kubatanidzwa kuzere sevashandisi vemadhijitari epuratifomu eaya maitiro. Uye izvo zvavanove nemitemo yekuvimbika nemakambani aya kana mapuratifomu epamhepo. Pasina chero mhando yematambudziko ekugutsa chishuwo ichi munyika yekudyiwa kwedhijitari.
Vakavimbika uye venguva yakazara vatengi
Chekupedzisira, iro boka rakanyanya kutsvakwa nevamabhizimusi mundima ino varipo. Ndivo vanhu avo zvakabatanidzwa mune iri boka rakasarudzwa mukushandisa kwakawanda. Kubva pane ino maonero, ivo vanogona kutopa zvishoma nekuti ivo vanosangana zvese zvinodikanwa kuti zvive rakanakisa boka mune chimiro chemabhizinesi kana ezvitoro zvepamhepo. Nedzakateedzana yezvipo zvisingawanikwe kune vese vashandisi. Kana zvisina kudaro, pane zvinopesana, zvinopa zvakanyatso tsanangurwa zviratidzo kubva kune chero mhando marongero ekutengesa.
Ivo vakanyatso kubatanidzwa muboka iri rekushandisa kwedhijitari uye kuti mune zvese zviitiko ivo vanopa yakakwana hunyanzvi ruzivo rwekuita nenzira kwayo mabasa ese ekutengeserana anogona kubuda kubva panguva dzino chaidzo. Zviratidzo zvaro zvikuru ndizvo zvatiri kuzonyora pazasi.
Ivo vashandisi vanoita mhando dzese dzekutengesa mashandiro kubva pamadhijitari ako uye ivo vanotova nekubata kushoma kwazvo neyakajairika kana echinyakare midhiya. Kunyangwe muhukama hwako hwemari kana nezvako zvemabhangi.
Ivo vakabatana kwazvo Nekushandisa matekinoroji matsva mune ruzivo. Kuvimba kwavo kwakanyanya kwazvo uye nekudaro ivo havasisina, kana zvishoma, hukama nevezvenhau kana nzira dzepanyama.
Dhigirii ravo rekubatana neaya midhiya mukushandisa rakanyanya uye haana chivimbo chetsika dzekare mubazi revatengi. Kana zvisiri, pane kudaro, ivo vari kufara kwazvo nemamiriro avo azvino. Zvese zvaakatenga zvinoitwa kuburikidza nerutsigiro rwetekinoroji, kunyangwe kwemakore akati wandei.
Hunhu hwavo, kazhinji, hunoenderana nevechidiki vane hunyanzvi hwekudzidzira uye avo vasingawanzo kuve nematambudziko ekuzviratidza mune mimwe mitauro. Uine kufarira matekinoroji matsva uye izvo zvakakwirira kwazvo mune zvese zviitiko uye izvo zvakare zvinoshandura muchikamu chevatengi.
Nepo kune rimwe divi, ivo havana kana chigumbu vhura kune zvitsva zviitiko mumunda wekushandisa kwedhijitari. Kusvika padanho rekuti ivo vakasununguka kwazvo vanhu kubata mari yavo uye zvese zvavanoda muhupenyu hwavo hwezuva nezuva. Kubudikidza nekudzidza kwakawanikwa mumakore nemakore ekuziva muhukama hwebhizinesi.
Pasi peiyi nzira yakajairika, iri boka rezvemagariro rinosarudzwa mukati memabhizinesi edhijitari nekuti neimwe nzira yakatovimbika. Kunyangwe izvi hazvireve kuti vanhu ava havafanire kuteverwa.
Kune rimwe divi, mashandisiro avanoita gore rega rega ari akakwirira kwazvo uye anoenderana zvakanyanya nerudzi urwu rwemiitiro yakasarudzika uye nekukwira muchikamu chinomiririrwa nekushandisa.
Uye pakupedzisira, zvinofanirwa kuyeukwa kuti iyi nhoroondo iyo iri padanho repamusoro Ivo chikamu cheboka rakabatana nemaitiro matsva mumusika. Nepo kune rimwe divi, ivo vari kuwedzera kuwanda pakati pezvimwe zvikonzero nekuti ivo vanoumbwa nevanhu vadiki kwazvo muSpanish nzanga.
Sezvaungave iwe waona, e-commerce vashandisi havana yunifomu. Kana zvisiri, pane kudaro, ivo vanoratidza zvakanyanya nuance kupfuura iwe zvaunogona kufunga kubva pakutanga.
Mukati meichi chirevo chitsva, zvinofanirwa kuyeukwa kuti aya ma profiles ekutenga online kana padhijitari chaizvo kuchinja pamusoro pemakore. Iwo anonyanya kuchinjika masisitimu uye iwe unogona kuenda kubva kune rimwe boka uchienda kune rimwe nekumwe kusununguka uye neimwe nzira inochinjika mukuenderana kwaro. Zvekuti nenzira iyi, mapato ese ari maviri ekutengeserana anokwanisa kubatsirwa nezviito zvavo. Nepo vanamuzvinabhizimusi muchikamu ichi vachizokwanisa kusimudzira kutengesa kwavo, vatengi kana vashandisi vanozove nenguva iri nyore yekuzivisa nevamwe vanhu kuchengetedza zvinangwa mumashandisirwo avo ekushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Vatengi profiles mu e-commerce
Ari sei mutengi weSpanish online?